Dhageyso+Akhriso Warbixinta;Mareykanka Oo Liiska Argagaxisada Ku Daray Hogaamiyaal Ka Tirsan Mujaahidiinta Shaam. – Bogga Calamada.com
Dhageyso+Akhriso Warbixinta;Mareykanka Oo Liiska Argagaxisada Ku Daray Hogaamiyaal Ka Tirsan Mujaahidiinta Shaam.
Waaxda maaliyadda ee dowlada saliibiyada ee Mareykanka ayaa Liiska argigixisada waxa loogu yeero ku dartay ilaa afar ruux oo ay sheegtay in ay ka mid yihiin masâ€™uuliyiinta Jabhadda Fatxu-Shaam, iyagoona ku baaqay in la beegsado shaqsiyaadkaas, lana soo gacan geliyo nolol iyo geeri qaabkii lagu helo.
Dadkan waxaa ka mid ah Dr. Cabdallah Al-Muxeysini oo ah wadaad ka soo jeeda dalka Sacuudi Carabiya, sidoo kalena joogo saaxada Shaam.
Muxeysini ayaa ah wadaad madaxbanaan oo aan ka tirsaneen koox ama fasiil gaar ah oo ka mid ah kooxaha ka dagaalama Suuriya balse dowlada Mareykanka waxay sheegeysaa in uu yahay xubin firfircoon oo ka tirsan Jabhadda Fatxu-Shaam.
Waaxda Maaliyadda waxay sheegtay in Muxeysini uu yahay hogaamiye firfircoon oo ka tirsan jabhadda Fatxu-Shaam, islamarkaana aysan waxba ka jirin wararka sheegaya in uu yahay nin iska madaxbanaan.
Waxay sheegeen in wadaadkan uu sanadkii 2015 ka mid ahaa daaâ€™irada hogaanka gudaha ee Jabhadda Fatxu Shaam, uuna dowr muhiim ah ku lahaa ciidameynta dhalinyarada iyo qoritaanka jiilka cusub ee camalka ku soo biiraya.
Sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa in uu ka mid ahaa culimo iyo shaqsiyaad dowr muhiim ah ku lahaa aas-aasitaanka isbaheysiga Jeyshul Fatxi oo ah Isbaheysi ay ku mideysan jamaacaadka hubeysan ee suuriya, sidoo kalena qaaday xamlooyin balaaran oo nidaamka looga saaray magaalooyin muhiim ah sida IDLIB iyo Jisr-Shuguur.
Eedeymaha ugu muhiimsan ee lagu soo eedeeyey Muxeysini waxaa ka mid ah in 3,000 oo dhalinyaro uu sanadkii 2016-kii uu u qoray Jabhadda Fatxu-Shaam ka dib xamlo balaaran oo baraarujin ah oo uu ka sameeyey qaar ka mid ah gobolada dalka Suuriya iyo xeryaha qaxootiga ee ku yaalla waqooyiga wadanka.
Sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in uu malaayiin lacag ah oo laga soo uruuriyey Muslimiinta khaliijka uu ku dacmiyey Jihaadka, islamarkaana uu ku taageeray mujaahidiinta ka dagaalama dhulka barakeysan ee Shaam.
â€œIntii u dhexeysay Sanadihii 2013 ilaa 2015, Waxaa Muxeysini uu sameeyey muâ€™asasaat dhowr ah oo soo uruurinayey dhaqaale lagu hubeynayo, laguna maalgelinayo jihaadiyiinta Shaam, kuwaas oo ahaa ila dhowr hayâ€™adood.
Waxaana howlihii ay qabteen ugu muhiimsanaa, oLole guuleystay oo ay ku soo uruuriyeen wax ka badan 5 milyan oo dollar kaas oo lagu hubeeyey Jihaadiyiinta Shaamâ€ ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday dowlada Mareykanka.
Warbaahinada reergalbeedka ayaa tilmaamaya in wadaadkan uu ka mid ahaa Ardaydii Sheykh Suleymaan Al-Calwaan, uuna saameyn ku dhex leeyahay gudaha Sacuudiga taasna ay keentay in uu soo jiito dhalinyarada iyo gacansatada, uuna ku baraarujiyo in ay yimaadaan saaxada, qofkii aanan awood u lahayna uu maalgeliyo jihaadka.
Muxeysini waxaa liiska lagula daray ilaa saddex hogaamiye oo kale oo ka tirsan Jabhadda Fatxu Shaam sida lagu sheegay warbixinta ka soo baxay dowlada Mareykanka, waxaana warbixinta lagu sheegay magacyadooda iyo shaqooyinka ay qaabilsan yihiin intaba
Dadkaas waxaa ka mid ah Jamaal Xuseyn Sayniyah oo sidoo kale loo yaqaano Abuu Abdi Malik Al-Qalimooni.Â Ninkaan ayaa Jabhadda Fatxu Shaam ugu magacaaban Amiirka Aagga Qalimoon, wuxuuna ka mid yahay madaxda ugu sareysa ee Mujaahidiinta.
Waaxda Maaliyadda ayaa qaaâ€™idkan ku tilmaantay in uu yahay nin aad u firfircoon oo badanaa qaabilsan howgalada Jabhadda ee Aagga u dhexeeya Lubnaan iyo Suuriya. Waxay ku eedeysay in uu ku lug lahaa falal afduubyo ah oo jabhadda ay ka sameysay xadka kala qeybiya Lubnaan iyo Suuriya, islamarkaana uu dhowrjeer halkaas wax ka soo afduubtay, sidoo kalena uu wada hadal maxaabiis isweedaarsi ah la sameeyey dowlada Lubnaan.
Waxay sheegtay in uu masâ€™uul ka ahaa afduubka dumar Nasaaro ah oo gudaha Dimishiq laga afduubtay sanado ka hor, iyo qafaalka ilaa 16 askari oo ciidamada Lubnaan ka tirsanaa.
Waxay sidoo kale sheegeen in uu ahaa shaqsiga mataliayey jabhadda fatxu sham intii lagu guda jiray maxaabiis isweedaarsigii dhexmaray Mujaahidiinta iyo xukuumada Lubnaan.
Qofka Saddexaad ee Liiskan lagu daray isagana waxaa lagu magacaabaa Cabdul Jashaar oo ku magac dheer Abuu Qataadah Al-Albaani, waxaa lagu tilmaamay in uu yahay qaaâ€™id sare oo la taliye dhinaca Military-ga ah, waxay waaxda Maaliyadda Sheegtay in uu ka mid yahay qiyaadada Sar-sare ee Jabhadda gaar ahaan saraakiisha Military-ga.
Ninkan ma jirto wax macluumaad dheeri ah oo ay ka sheegtay waaxda Mareykanka balse Kalimad uu sanadkii 2014-ka Jeediyey Amiirka Jabhadda Fatxu Shaam wuxuu ninkan ku tilmaamay in uu yahay masâ€™uulka ciidamada Military ee Jabhadda.
Qofka Afaraad ee magaciisa liiskan lagu sheegay waa Ashraf Axmed ninkan waaa abaanduulaha ciidanka Jabhadda Fatxu Shaam ee koonfurta Suuriya.